भन्ने ३३% महिला - गर्ने विभेद ? - Yugantar Khabar | News Portal
भन्ने ३३% महिला – गर्ने विभेद ?
Posted on November 24, 2021 by Basanta Pariyar
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै महिलालाई नेतृत्वमा सहभागी गराउँदै आएको बताए। ‘पार्टीको जिल्ला, नगर, गाउँतहका समितिबाटै ३३ प्रतिशत महिला चयन हुँदै आएका छन्,’ शर्माले भने । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।